हार्दिक श्रद्धाञ्जली! परिवार मात्रै रोएनन्, समाज पुरै यसरी रोएपछि… – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > हार्दिक श्रद्धाञ्जली! परिवार मात्रै रोएनन्, समाज पुरै यसरी रोएपछि…
admin October 3, 2020 October 3, 2020 जीवनशैली	0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको १६ दिनपछि २५ वर्षीया युवतीको मृ’त्यु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बाँकेकी २५ वर्षीया दीपा कुँवरको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा आज मृ’त्यु भएको हो । दी’र्घरोग वा अन्य स्वास्थ्य स’मस्या नभएको र उनको मृ’त्युको कारण कोभिड १९ रहेको उपचारमा सं’लग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।
दीपाको स्थायी ठेगाना धनगढीको स’न्तोषी टोल रहेको छ । उनी केहीवर्षदेखि बाँकेको नेपालगञ्जमा बस्दै आएकी थिइन् ।भदौ ३० गते स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको र त्यहीँ दिन भेरी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो ।
निरन्तर स्वास्थ्यमा ज’टिलता देखिएपछि प्लाज्मा थे’रापी र रे’मडिसिभिर दिएर उपचार थालिएको थियो ।आज बिहान ११ बजे स्वास्थ्य अवस्था ज’टिल बनेको र भे’न्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । तर, बेलुकी पौने ५ बजे उनको मृ’त्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।कोरोनाका कारण उनको दुबै सा’इडको फोक्सोमा नि’मोनियाको स’मस्या देखिएको थियो । ***समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***
भाईरल जोडी बखत र प्रतिभाको यस्तो बिजोग, चाउचाउ खाएर रात कटाए (भिडियो हेर्नुस)